Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် hနှင့်wheel ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
handwheel နှင့်အတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. Terminal နှင့်
-Terminal အရွယ်အစား: 10A 22Ã 32 ။
handwheel နှင့်အတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. Space ကိုအပူပေးစက်
4. 1 ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာစေရန် handwheel အတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးရှိသင့်ပါသည်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
handwheel အတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator ကိုသုံးပြီးခင်မှာ 2, ဂရုတစိုက်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းနှင့်အညီသွန်သင်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
3 ဒါဟာခြောက်သွေ့လေဝင်လေထွက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်။ မြေပြင်ကနေအစိုဓာတ်ကိုကျူးကျော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့, handwheel နှင့်အတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator စင်ပေါ်တွင်နေရာချသို့မဟုတ်သစ်သားပျဉ်ပြားများကကွဲကွာရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-မေးစီးရီး၏အရည်အသွေး handwheel နှင့်အတူ rotary လျှပ်စစ် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး: သင် handwheel နှင့်သင်၏ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
မေး: ငါတို့သည် handwheel နှင့်သင်၏ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်